Dowladda oo dib u dhigtay doorashada madaxda sare - BBC News Somali
Dowladda oo dib u dhigtay doorashada madaxda sare
24 Abriil 2011
Xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya ayaa baajisay doorashada madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo dhici lahayd bisha August ee sanadkan.
Golaha wasiirrada oo fadhigooda maanta uu shir gudoominayay ra’isul wasaare Maxamed C/laahi ayaa waxay sheegeen in doorashada la qaban doono bisha August ee 2012ka.
Go’aanka ay gaareen golaha xukuumadda KMG ah ayaa qodobada ay u cuskadeen waxa ugu muhiimsan wax ay ku tilmaameen horumarka laga sameeyay dhinacyada amniga, siyaasadda, dhaqaalaha, xuquuqda shaqaalaha iyo baahida ciidammada taasoo ay sheegeen in baahi loo qabo in la joogteeyo lana dhammeystiro.
Go,aanka manta ka soo baxay golaha xukuumadda Soomaaliya ay waxa uu imanayaa xilli uu muran adag ka taagan yahay waxa dhici doona marka uu dhammaado waqtiga DKMG ah oo ay ka harsan tahay afar bilood oo keliya.
Xukuumadda KMG ayaa tan iyo markii uu baarlamaanka Soomaaliya sheegay inuu waqtigiisa saddex sano ku kordhistay waxa ay soo saareen go'aanno kala duwan oo ay qaarkood isburinayaan.
Beesha caalamka ayaa ku kala qeybsan aragtida ay ka qabaan waxa uu ahaan doono mustaqbalka DKMG ah, dowladaha qaar ayaa qaba in baarlamaanka waqtiga uu kororsaday loo daayo ama hal sano laga dhimo laakiin ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka halka kuwa kalana ay doonayaan in la baajiyo doorashada bisha August ee sanadkan oo hal sano oo hor leh isla dowladdan loo kordhiyo.
Dhowaan madaxweynaha DKMG ah Shariif Sheekh Axmed oo hadal u jeediayay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaa uu sheegay inuu yahay musharax haddii ay doorasho dhacayso.
Si kastaba ha ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa waqtigeedu waxa uu ku egyahay bisha Ogost ee sanadkan aynu ku jirno ,sida kaliya ee ay dowladdu doorasho uga baaqsan karto ayaa ah in shirweyne uu xilliga u kordhiyo ama ugu yaraan ay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya cod aqlibiyad buuxda ku ansixiyaan kororsiimada muddada halka sano waxaana ay tani ku xirnaan doontaa xirfadda madaxweynaha iyo raisul wasaaraha oo arintan isku mowqif ka ah sida ay uga dhaadhicin lahaayeen xubnaha baarlamaanka.
Maqal Darawaliinta gaadiidka iyo ganacsatada wax kala soo dega Dekedda Berbera oo cabanaya
Darawaliinta gaadiidka iyo ganacsatada wax kala soo dega Dekedda Berbera oo cabanaya
Maqal Dhalinyaro Muqdisho ka bilaabay in habeenkii ay wargeys soo saaraan
Dhalinyaro Muqdisho ka bilaabay in habeenkii ay wargeys soo saaraan
Maqal Somaliland oo wasiirro iyo shirkado gaar loo leeyahay lagu eedeeyay musuqmaasuq
Somaliland oo wasiirro iyo shirkado gaar loo leeyahay lagu eedeeyay musuqmaasuq
Maqal Ururada u dooda xuquuqda dumarka Somaliland oo ku baaqay dhaqan gelinta xeerka ka hortagga kufsiga ee Somaliland
Ururada u dooda xuquuqda dumarka Somaliland oo ku baaqay dhaqan gelinta xeerka ka hortagga kufsiga ee Somaliland